Microbulk Tank-Bulk Gases Izixhobo-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ukufaka isicelo sokugcina i-LOX, LN2, LAR, LCO2, LNG njl.
SinoCleansky I-Microbulk Tank --- MT uthotho liqonga lokugcina irhasi, ngokukodwa eyilelwe ababambeleyo babasebenzisi besilinda kwimizi yokusika, ukuwelda, ilebhu ye-cryogenic, isibhedlele kunye nokunye. I-MT yethu ene tanki yelori ibaluleke kakhulu.
I-SinoCleansky Microbulk Tank --- Inkqubo yokugcina i-MT ivumela abasasazi begesi abapakishwe kunye nabasebenzisi ukuba bonwabele izibonelelo zokuhanjiswa kwegesi kwindawo. Ukuthintela inkunkuma yexesha, ilahleko engamanzi, iindleko zomsebenzi xa ufaka iisilinda. Sebenzisa MT uthotho, akukho silinda sithatha indawo, akukho lahleko lulwelo, akukho monakalo kwimisebenzi.
Itanki yeMicrobulk iya kusongwa ngefilimu eyomeleleyo yeplastiki kwaye ipakishwe kwisikhongozeli kwaye ilungiswe ngeentambo. Okanye ngesiqulatho esingaphezulu esivulekileyo.